Xog: Madaxweyne Farmaajo iyo Hailemariam oo kulan yeelanaya - Caasimada Online
Home Warar Xog: Madaxweyne Farmaajo iyo Hailemariam oo kulan yeelanaya
Xog: Madaxweyne Farmaajo iyo Hailemariam oo kulan yeelanaya
Muqdisho (Caasimada Online ) – Sida aan wararkeena hore ku sheegnay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa in booqasho uu ku gaaro magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Madaxweynaha ayaa halkaa uga qeybgali doona shir khaas ah oo ay yeelan doonaan Madaxda Urur Goboleedka IGAD kaa oo looga hadli doono arrinsanayaan xaalada qaxootiga Soomaaliya.
Madaxweynaha ayay halkaasi isku arki doonaan Ra’isul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn oo isna qeyb ka noqon doona shirka, sida aan xogta ku helnay.
Madaxweyne Farmaajo oo waayadaani indhaha ka qabsanaayay dalabka Casuumaada ah oo ay u fidisay Ethiopia ayaa iminka u muuqda in ujeedka laga lahaa Casuumaadaasi ay magaalada Nairobi ku wada dhameysan doonaan Hailemariam Desalegn.
Waxyaabaha ay kawada hadli doonaan ayaa waxaa kamid ah xiriirka labada dal oo tan iyo markii la doortay Farmaajo sii galaayay mugdi, walow labada mas’uul si wada jir ah ay u muujin doonaan xiriir Diplumaasiyadeed.
Farmaajo waxa uu sidoo kale magaalada Nairobi kula kulmi doonaa dhammaan Madaxweynayaasha Africa, gaar ahaan kuwo qeybta ka ah Urur Goboleedka IGAD.
Madaxweynayaasha ay isku arki doonaan magaalada Nairobi ayaa waxaa kamid ah Madaxweynaha Jabuuti, Labada Sudan, Ugandha iyo Madaxweynaha marti galiyay shirka Uhurro Kenyatta.
Labada Mas’uul ee sida weyn ugu hamuun-qaba is araga Madaxweyne Farmaajo ayaa kala ah Madxaweynaha Kenya Uhurro Kenyatta iyo Ra’isul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Desalegn oo walaac ka qaba isbedelka ku imaada Somalia.
Docda kale, waxaan la ogeyn isbedelka ku imaan doona go’aanka Madaxweyne Farmaajo haddii ay wada kulmaan Hailemariam Desalegn oo u hanqal-taagaya gacan ku dhigista Siyaasada Dowlada Cusub.